Fanontaniana maro no valiana ato Solar Solve Marine
F: Ahoana no hanadiovana ilay horonantsary / lamba?
A: Eo amin'ny toe-javatra mahazatra mahamay amin'ny volo mangatsiatsiaka dia ny zavatra rehetra ilaina. Ny fanontam-pirinty, ny fetim-panafody ary ny marika mafy amin'ny sarimihetsika, dia azo esorina amim-pitandremana amin'ny lamba fotsy sy lamba malefaka, ary arakaraka ny fofona amin'ny lamba marevaka tsy nokarakaraina amin'ny rano madio. Raha toa ka maloto be ny karazana sarimihetsika na tavy, dia mety hosoloina amin'ny lamba malefaka tsy madio sy rano madio miaraka amin'ny savony na savony kely. Tsy hanisy ratsy izany raha toa ka avela tanteraka maina tanteraka ny horonantsary / lamba alohan'ny hisintonana azy. Tokony hoesorina ny rano loatra raha mandao rano marika rehefa maina. Raha manana fanontaniana fanampiny momba ny fanadiovana ny horonantsary ianao dia mifandraisa aminay.
F: Tsy maintsy mametraka ny efijery aho amin'ny fanatrehana ny varavarankelin'ny trano fitodian-trano izay miala eo an-tampony. Hahita ny sarimihetsika ve ny sarimihetsika sarimihetsika ary hikorontana rehefa tapahina?
A: Ny valiny dia mety eny mety hitranga ary hanome toro-hevitra amin'ny mpanjifa izahay fa afaka mandefa azy ireo kitay hazo miaraka amin'ny efijery izay azon'izy ireo ampiasaina ho fomba iray hafa fametrahana mba hahazoana antoka fa mety amin'ny varavarankely zoro mihoatra ny 15 degre avy eo ny toerana mitsangana. Amin'ny ankamaroan'ny fametrahana dia voaporofo fa azo ekena tanteraka. Saingy, eto amin'ny Solar Solve dia tsy faly tamin'ity valiny ity velively izahay ary faly izahay ankehitriny milaza fa manana vahaolana hafa. Izahay izao dia afaka manome anao ireo fononteny zoro (zoro ambony) izay misy amin'ny habe telo (45mm, 56mm & 64mm) Mino izahay fa ny fononteny zoro dia manome vahaolana tonga lafatra amin'ilay fanontaniana napetraka matetika. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia mifandraisa amin'ny ekipa teknikanay izay faly hiady hevitra momba an'io na olana hafa miaraka aminao.
F: Ny varavarankeliko dia tsy endrika efa-joro, mahitsizoro. Inona avy ireo endrika azonao amboarina ny écran / blinds koa?
A: Afaka manamboatra efijery / jamba mba hifanaraka amina endrika hafa am-baravarankely izahay. Raha mifindra amin'ny fizarana "Fampahalalana" amin'ity tranonkala ity ianao ary avy eo misafidy "endrika baravarankely" dia azonao atao ny mijery ireo endrika rehetra misy. Ho hitanao eto ihany koa ny fomba ahafahantsika manampy amin'ny famahana ny olana misy Trapezium / Parallelogram windows windows.
F: Inona no azoko atao raha mihamatroka kokoa noho ny any ambony ny varavarankeliko?
A: Amin'ity fotoana ity raha manana toerana ampy ianao hametrahana ny jiro / jiro any amin'ny faran'ny varavarankarinao, dia afaka manome izay antsointsika hoe FIT INVERTED. Eto dia ny jiro / jamba sy ny horonantsary / ny lamba dia asongadina ambony ny vera. Ohatra avy amin'ny EXERCED screen / jamban-tsainay izay azontsika amidy dia azo jerena amin'ny famindrana mankany amin'ny fizarana teknika amin'ity tranonkala ity ary avy eo misafidy endrika maotera misy. Mariho fa tsy manolotra ny INVERTED FIT miaraka amin'ny fiasàna elektrika isika.
F: Inona no habe farafahakeliny ahafahana mijery ny jiro / jiro?
A: Ny sakan'ny lehibe indrindra dia matetika metatra 3.5 saingy mety ho afaka manamboatra tarehimarika lehibe / jiro amin'ny fangatahana manokana. Azo alaina ihany koa ny fampiroboroboana ny fidina avy amin'ny 3 metatra mankany amin'ny 4 metatra amin'ny tranga sasany.
Q: Fa maninona ny Double Pulley Bottom Rail miaraka amin'ny fepetra mitatao amin'ny fihodinana tsy tapaka atolotra ho an'ny ankamaroan'ny orinasan-jiro solosaina?
A: Io rafitra io dia mety ho an'ny varavarankely rehetra ary indrindra indrindra ny varavarankely mihodinkodina satria manome tery ampy ho fanohanana ny efijery. Amin'ny fampiasana rindran-damba mpitarika, manindry bokotra / clam hikirakotra sy tsipika fikororohana, dia azo ampiasaina amin'ny toerana 3 mankany amin'ny 4 metatra lavitra ny varavarankely ny efijery. Tena ilaina izy io raha tsy misy fidirana mivantana amin'ny varavarankely. Misy toro-lalana fanampiny, tady sns, azo omena amin'ny toe-javatra samihafa.
F: Inona no lokon'ny sarimihetsika tianao?
A: Misy sarimihetsika 4 hisafidianana ka hanontany isika hoe inona ny olana lehibe - Heat or Glare? Raha hafanana ny olana dia misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fahombiazan'ny sarimihetsika isan-karazany. Raha toa ny mpampiasa farany tsy manana fanoherana horonantsary maneho taratra be amin'ny varavarankelin'ny tetezana fitetezana dia matetika no manome soso-kevitra an'i GOLD ho safidy voalohany ary ny SILVER ho safidy faharoa. Raha misy fisalasalana amin'ny fampiasana sary mihetsika be fandinihana na fangatahana azo antoka hisorohana azy ireo, dia matetika izahay no manoro hevitra ny GRAY ho safidy voalohany (satria mahomby kokoa io) na BRONZE raha toa ka tsy mila fiarovana afa-tsy kely nefa mbola mandaitra ny mpanjifa. Raha toa ka manjelanjelatra ny olana dia ny sarimihetsika GOLD, SILVER ary GRAY dia saika mandaitra ary noho izany ny fanondroana ny safidin'ny mpampiasa farany dia mety hanondro izay voafidy. Na inona na inona sarimihetsika alokaloka loko omena, hisy fihenan'ny hafanana sy famirapiratana hita ao anatin'ny faritra arovan'ny efijery, hamorona tontolo iainana azo antoka kokoa. Ny loko sarimihetsika rehetra dia mitovy vidiny. Ity ambany ity ny horonan-tsary fampitahana loko sarimihetsika.
F: Nahoana no misy marika / jiro sasany mifamory?
A: Ny ravin-damba sy ny sarimihetsika dia tonga amin'ny elanelana samihafa. Raha toa ny habaka amin'ny jiro / jiro notakiana dia lehibe kokoa noho ny sakan'ny horonan-tsoroka na ny sakany sy ny dian-tongotra, dia tsy azo atao ny manao azy amin'ny ampahany iray. Tsy maintsy mifanerasera amin'ny sehatry ny horonantsary / mifangaro ny firaiketam-peo. Fanamarihana: tsy azo atao ny miaraka.
F: Inona no fitaovana elektrônika mifehy ny herinaratra miaraka amin'ny jiro / jiro elektrônika?
A: Fikirakirana ny fantsona 3-toerana.
F: Firy ireo jiro mivezivezy amin'ny angovo ambany no azo atao amin'ny mpanofana iray?
A: Azonao atao ny mihazakazaka bisikileta folo / milina mirefy 24 volt avy amin'ny transformer iray.
F: Moa ve ny horonantsary / tapa-taratasy mitovy habe mitovy amin'ny jiro / jiro?
A: Tsia. Ny farany dia mila miverina ao anaty fonosana, izay midika fa tsy maintsy manitatra azy ireo ivelan'ny sisin'ny tavoahangy miloko manohana ny horonantsary / lamba. Ilaina koa ny fahazoana fanampiny. Ny hatevin'ny horonan-tsary / lamba dia noho izany ny 38mm kely kokoa noho ilay jiro / jiro misy rindrina na kazety, arakaraka ny karazana entana novidiana.